CIA-da Mareykanka oo Sheegay in Sheekh Osama Bin Laden uu Xarakada Al Shabaab Kula Taliyay Khaarijinta Madaxweynaha Uganda.
Thursday May 21, 2015 - 10:06:01 in Wararka by Super Admin
Dowladda Mareykanka ayaa baahisay warqado ay sheegtay in lagasoo helay gurigii uu sheikh Osama Bin laden ka degganaa magaalada Otabaad ee wadanka Pakistan.
CIA-da Mareykanka ayaa faafisay illaa 400 oo ah warqado ay is dhaafsadeen sheikh Osama Bin Laden iyo hoggaamiyaasha faracyada Al Qaacidda kuwaasi oo ay ku cadyihiin qaabka wada shaqeyneed ee ka dhaxeeyay hoggaanka mujaahidiinta.
Walxaha CIA faafisay waxaa kamid ah Buugaag luqadda carabiga ku Tarjuman oo ku saabsan qorshe dagaaleedka mujaahidiinta Al Qaacidda ku wajahayaan dowladda Faransiiska ee caanka ku ah cadaawadda ay uqabto islaamka iyo muslimiinta.
Nuskhooyin kamid ah warqadaha labaahiyay waxaa ku caddaa qoraal uu Bin laden udiray amiirkii hore ee xarakada Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Abuu Zubeyr.
Bin laden ayaa xarakada Al Shabaab siiyay talooyin dhowr ah oo dhammaantood faa’iido u lahaa shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaana kamid ahaa in hormarin lagu sameeyo ganacsiga dalka iyo wilayaatka laga hirgeliyo garsoor cadaalad ah.
Allaha unaxariistee sheikh Osama ayaa mujaahidiinta Soomaaliya ugu baaqay in ay dilaan Hoggaamiyaha dalka Ugana Museveni si uu u joogsado duullaanka saliibiga ah ee muslimiinta Soomaaliya uga imaanaya Uganda.
Sida Mareykanku baahiyeen tallooyinka Bin laden uu siiyay xarakada Al Shabaab waxaa kamid ahaa in dhabarka laga jebiyo kooxaha Mushrikiinta Ahlusuna sheegta kuwaasi oo iyagoo wakiillo ah Itoobiya mujaahidiinta kula dagaalamay Gobollada dhexe.
Illaa iyo hadda lama xaqiijin karo saxnimada qorraalada Mareykanku baahiyeen ee ku aaddan warqadaha laga helay hoyigii sheikh Osama Bin laden ku lahaa wadanka Pakistan sanadii 2011 waxaana laga yaabaa in CIA-da ay waxbadan ka bedeleen qorraalada oo ay soo gudbiyeen sida ay iyagu rabaan ama waxa ay soo bandhigeen ay sax tahay.
Warar sheegaya in laxiray Wasiirkii Gaashaandhigga dowladda Itoobiya.
Madaxweynaha Ghana oo xaalad Karaantiil ah lageliyay.
Al Shabaab oo sarkaal katirsanaa CID-da ku dishay magaalada Baydhabo.
Al Shabaab oo weeraray saldhig kuyaal duleedka degmada Beled Weyne.
Mareykanka oo dambiyo dagaal oo hor leh ka geysanaya Soomaaliya [Warbixin cusub]